"နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့" Gaming ဒေတာပတ်ခ် - တရက် ၉၉ကျပ်
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ကို တစ်ရက် ၉၉ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 90MB ရယူလိုက်ပါ။
*2099*1# USSD မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor app မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်
Mobile Legends, PUBG Mobile, FreeFire ဂိမ်းများကိုဆာ့ရန်အတွက် 90MB
နေ့စဉ် ၉၉ကျပ်ဖြင့် renewal ဖြစ်ခြင်း
ရရှိလာသော 90MB ကို Mobile Legends, PUBG MOBILE နှင့် FREEFIRE ဂိမ်းများ ဆော့ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
90MB အသုံးပြုခြင်းကျော်လွန်သွားပါက Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ်PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။ အခြား စုဘူး ဒေတာပတ် သို့မဟုတ် ဒေတာပတ်တစ်ခုခုရှိပါက PayGo မှမဟုတ်ဘဲ ရှိသည့် ဒေတာပတ်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်သည် အထက်ပါ ဂိမ်းများကစားခွင့် နှင့် ဂိမ်းအတွင်းအသံဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အတွက်သာဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုခုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ PlayStore or App Store မှ game update/download လုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း၊ Facebook, Youtube, TikTok (သို့မဟုတ် အခြား link များအတွက် မပါဝင်ပါ။)
Super Htaw plan တစ်ခုခုရယူထားပါက Super Htaw မှ ဂိမ်းအတွက် အသုံးပြုခြင်းကို အရင်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး Super Htaw လက်ကျန်ကုန်ဆုံးမှသာ Gaming Pack မှ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
"၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့" Gaming ဒေတာပတ်ခ် - ၄၉၉ကျပ်
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ကို တစ်ရက် ၄၉၉ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 460MB နဲ့ ရယူလိုက်ပါ။
Mobile Legends, PUBG Mobile, FreeFire ဂိမ်းများကိုဆာ့ရန်အတွက် 460MB
ရရှိလာသော 460MB ကို Mobile Legends, PUBG MOBILE နှင့် FREEFIRE ဂိမ်းများ ဆော့ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
460MB အသုံးပြုခြင်းကျော်လွန်သွားပါက Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ်PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။ အခြား စုဘူး ဒေတာပတ် သို့မဟုတ် ဒေတာပတ်တစ်ခုခုရှိပါက PayGo မှမဟုတ်ဘဲ ရှိသည့် ဒေတာပတ်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်သည် အထက်ပါ ဂိမ်းများကစားခွင့် နှင့် ဂိမ်းအတွင်းအသံဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အတွက်သာဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုခုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ PlayStore or App Store မှ game update/download လုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း၊ Facebook, Youtube, TikTok (သို့မဟုတ် အခြား link များအတွက် မပါဝင်ပါ။
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
တယ်လီနောသုံးစွဲသူ Gamer များအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ကိုနေ့စဉ် 90MB အထိဆော့နိုင်မည့် ဒေတာပတ်ခ် တစ်ခုဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ သက်တမ်းကဘယ်လောက်လဲ?
နေ့စဉ် ၉၉ကျပ်ဖြင့် တစ်ရက်သက်တမ်း ( ၉၉ကျပ်ဖြင့် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသွားမည် )
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ကိုဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်မလဲ?
ရရှိသည့် 90MB ကုန်လွန်သွားပါက ဘာဖြစ်မလဲ?
90MB ကျော်လွန်သွားပါက ကျော်သွားသည့်အကြောင်း SMS ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျော်သွားသည့်အချိန်မှစ၍ Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ် ကို PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။
အခြား စုဘူး ဒေတာပတ် သို့မဟုတ် ဒေတာပတ်တစ်ခုခုရှိပါက PayGo မှမဟုတ်ဘဲ ရှိသည့် ဒေတာပတ်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်တွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိပါသလား?
နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ် ရယူပြီးကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
အစီအစဉ်အောင်မြင်စွာရယူပြီးတိုင်းအတွက် SMS notification ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MyTelenor App special tab အောက်တွင်လဲ ရယူထားကြောင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။
အစီစဉ်သက်တမ်းမှာစက်တင်ဘာလ ၈ရက်မှ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်း မကြေငြာခင်အထိ
အကယ်၍ Super Htaw plan တစ်ခုခုရယူထားပါက မည်သည့် plan မှ အသုံးပြုခြင်းကို အရင်ကောက်ခံသွားမလဲ။
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
တယ်လီနောသုံးစွဲသူ Gamer များအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ကိုနေ့စဉ် 460MB အထိဆော့နိုင်မည့် ဒေတာပတ်ခ် တစ်ခုဖြစ်သည်။
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ သက်တမ်းကဘယ်လောက်လဲ?
နေ့စဉ် ၄၉၉ကျပ်ဖြင့် ၇ရက်သက်တမ်း
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ကိုဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်မလဲ?
*2499*1# USSD မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor app မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်
ရရှိသည့် 460MB ကုန်လွန်သွားပါက ဘာဖြစ်မလဲ?
460MB ကျော်လွန်သွားပါက ကျော်သွားသည့်အကြောင်း SMS ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျော်သွားသည့်အချိန်မှစ၍ Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ် ကို PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ် ရယူပြီးကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
အစီအစဉ်အောင်မြင်စွာရယူပြီးပါက SMS notification ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MyTelenor App special tab အောက်တွင်လဲ ရယူထားကြောင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်တွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိပါသလား?
၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်သည် အထက်ပါ ဂိမ်းများကစားခွင့် နှင့် ဂိမ်းအတွင်းအသံဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အတွက်သာဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုခုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ PlayStore or App Store မှ game update/download လုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း၊ Facebook, Youtube, TikTok (သို့မဟုတ် အခြား link များအတွက် မပါဝင်ပါ။)